Allgedo.com » Golaha wasiirada Xukuumadda Ku Meel gaarka Soomaaliya oo maanta shir xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho. (SAWIRO+DHAGEYSI)
Home » News » Golaha wasiirada Xukuumadda Ku Meel gaarka Soomaaliya oo maanta shir xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho. (SAWIRO+DHAGEYSI) Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Muqdisho, Somalia (AOL) - Shir ay maanta yeesheen Golaha Wasiiradda oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Warbixin safarkii Ra’iisul Wasaaraha, arrimaha amniga, Dhameystirka soo xulida Ergada iyo qabsoomida shirkii lagu ansixin lahaa Dastuurka.
Halkaan ka dhageyso Wasiirka Gaashaandhiga iyo midka Dastuurka ee Xukuumada KMG oo saxaafadda la hadlay.
Halkaan ka dhageyso Wasiirk Waxbarashada ee Xukuumada KMG oo isna saxaafadda la hadlay.